Sawirka Farshaxanka ee Blackmagic Pocket Camera 6K iyo URSA Mini Pro 4.6K G2 Qabashada Gudaha taxanaha Tilmaaman ee Sun | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE
Home » News » Kamaradaha Shineemadda Blackmagic Pocket 6K iyo URSA Mini Pro 4.6K G2 Qabsashada Taxanaha Sun ee Kacitaanka
Kamaradaha Shineemadda Blackmagic Pocket 6K iyo URSA Mini Pro 4.6K G2 Qabsashada Taxanaha Sun ee Kacitaanka
Fremont, CA - Janaayo 9, 2020 - Blackmagic Design ayaa maanta ku dhawaaqay in shirkadda wax soosaarka ee Echo Bay Media ay adeegsatay Pocket Cinema Camera 6Ks, Pocket Cinema Camera 4K iyo URSA Mini Pro 4.6K G2 si ay u toogtaan taxane-yar-Jabbaan-Canadian-ka ah 'Into the Rising Sun,' kaas oo laga sii daayay CHCH-ga Kanada bishii Diseembar 2019. Echo Bay Media waxay toogtay taxanaha Blackmagic RAW waxayna ku tiirsanayd DaVinci Resolve Studio oo ku saabsanaanta midabaynta.
“Into the Rising Sun” waxaa la soo saaray iyadoo lala kaashanayo shabakadda JSS ee Japan waxaana lasocda Echo Bay Media Cofounder iyo Soosaaraha Scott Wilson inta uu ku safrayo dhamaan qaybaha yar ee la arkaayo ee Jabaan, sahaminta aagag muuqaal oo kala duwan inta uu saaranyahay mooto. Taxanaha waxaa toogtay oo hagaya Echo Bay Media Cofounder Andre Dupuis wuxuuna u ogolaanayaa daawadayaasha inay la kulmaan yaabka cajiibka ah ee baadiyaha reer Japan.
Markii aad dooranaysay qalabka mashruuca, Wilson iyo Dupuis waxay ogaayeen inay u baahan yihiin kaamirooyin fudud oo la qaadi karo, laakiin taasi weli waxay bixisay muuqaalkii ugu wanaagsanaa ee filimka taxanaha ahaa. Iyaga oo isku daraya laba Pocket Cinema Camera 6Ks iyo Pocket Cinema Camera 4K, Wilson iyo kooxdu waxay awoodeen inay qabsadaan daqiiqado gaar ah oo dhaqanka Japan ah iyagoo aan loo diidin.
Waxaan jecel nahay in lagu dul duulo darbiga sida aan wax u qabanno, waana ay fududaatay sababtoo ah sida ay u mideysan yihiin shaneemada Jeebka. Tusaale ahaan, markaan u soconeyno macbud, iid, ama ku raaxeysana khibrad cunto, waxaan ku tiirsanahay Pocket Cinema Cameras maadaama aysan carqaladeyneynin waqtiga isla markaana wax ku qaban lahayn si dhab ah. Taasi waxay ahayd mid cajiib ah runtiina annaga muhiim noo ah, ”ayuu yidhi Wilson.
Pocket Cinema Camera 6K ayaa sidoo kale siiyay Echo Bay Media qaraarka dheeriga ah ee ay u baahan yihiin. Tani waxay ahayd faa iido weyn markii la toogtay Mootooyinka Masaakiinta gaar ahaan.
Waxaa jiray waqtiyo markii uu Andre dhinac ka soo laalaadayo minivan waddo weyn ah oo uu saaran yahay Pocket Cinema Camera 6K oo loo yaqaan xasilooni, isagoo igu toogtay mootada. Xaaladahaas, burooyinka iyo buullada ayaa lama huraan ahayn, ”ayuu yidhi Wilson. Si kastaba ha noqotee, sababta oo ah qaraarkii dheeraadka ahaa ee aan helnay markii aan tooganeyn 6K, waxaan si fudud u garaaci karnaa, xasillin karnaa oo aan ku dhameystirnaa tallaalada. Waxay u suuragashay inay socodsiiso xaallad iyo hub.
Dupuis ayaa yidhi, "Raad-raac yar oo kaamaradu leedahay, awood ay ku toogato Blackmagic RAW, iyo 13 joogsi oo kaladuwan oo firfircoon ayaa si buuxda ula shaqeeyey xasilinteena," ayuu yidhi Dupuis. "Waxay noo oggolaatay inaan qabanno durdurno caadi ahaan u baahan kara qaali aad u qaali ah, ujeedo loo dhisay gawaarida kaamerada leh oo wata kamaradaha culus iyo gimbals."
Awooda lagu toogto Blackmagic RAW waxay cadeysay inay faa iido weyn u leedahay Dupuis iyadoo la qabanayo sawirada qaabka filimka.
“Marka aan tooganeyno qaab dukumiintiyo ah, waxaan u baahanahay inaan la safrin seddex koob oo muuqaalka sawirada ah. Tani waxay ka dhigan tahay in dirawalku si dhakhso leh u buuxsamo, ”ayuu yidhi Dupuis. Ku safridda adduunka culeys yar iyo tiro ahaanba intii suurtagal ah waa muhiim. Blackmagic RAW wuxuu ina siinayaa dabacsanaantiisa iyo hufnaantiisa, iyadoo bixineysa tayada muuqaalka ugu wanaagsan cabirka ugu yar. ”
Isku soo duuboo socodka shaqadiisa, Pocket Cinema Camera 4K waxaa loo isticmaalay sidii muuqaalka sawirka habeenkii ee iftiinka eber, sida macbudyo mugdi ah ama socod habeenkii lagu socdo, ama markii kooxdu ay dooneysay inay abuurto darbo leh durdur aad u yar.
Intaa waxaa u dheer, Dupuis wuxuu u isticmaalay URSA Mini Pro 4.6K G2 sidii goob shaqo oo loogu talagalay waxyaabaha laga hadlayo, sida wareysiyada, sababtuna tahay soo-saareyaasheeda XLR-ga, kontaroolo maqal oo la heli karo, oo lagu dhisay filter-yada ND, iyo laba istaago dheeri ah oo dheellitirka latitude ah. A Pocket Cinema Camera 6K ayaa loo adeegsaday iyadoo lala adeegsanayo URSA Mini Pro 4.6K G2 si looga gudbo toogashada wareysiyada, oo si isdaba joog ah u dhigma.
"Markii aan lahaa labo joogsi oo dheeri ah oo firfircoon ayaa igu kalifay inaan gaadho URSA Mini Pro 4.6K G2 in ka badan inta aan ahayn," ayuu yidhi Dupuis. Intaa waxaa sii dheer, in laga dhex dhiso miiraayada miirayaasha ND waa ii muhiim aniga, maadaama aan inta badan raadsado inaan ku dhejiyo F Stop gooni ah oo loogu talagalay qotoda dheer ee garoonka oo dhan. Waxaan halkaas ku haystaa xakameyntan oo ah dhuuqa garabka. ”
Dhamaan wax soo saarka, Dupuis iyo shaqaaluhu waxay ku toogteen Blackmagic RAW, iyo midabeeyaha Echo Bay Media Ryan Edwardson ayaa kor u qaaday taxanaha DaVinci Resolve Studio.
“Markii aad la shaqeyneyso kamarado badan goob iftiin isku dhafan, Blackmagic RAW waxay gacan ka geysaneysaa hubinta isku habboonaanta midabka iyo isku-darka si loo abuuro dareen isku wada mid ah goo gooynta,” ayuu xusay Edwardson. "Laga soo bilaabo dabacsanaanta heerkulka midabka ganaax ee Blackmagic RAW, illaa midabaynta isku dhejinta muuqaalka Image Wipe oo ay weheliso soo-saare karti leh RGB, DaVinci Resolve Studio wuxuu suurtogal ka dhigayaa in lagu daro saxda istuudiyaha si loo socodsiiyo iyo qorista dokumeentiga ee kumbuyuutarrada badan ee shaqada."
Sida dhaxalka ah Blackmagic Design adeegsadayaasha, Echo Bay Media waxay qorsheyneysaa inay sii waddo adeegsiga qalabkeeda hadda jira ee waxsoosaarka soo socda. Waan isticmaalnay Blackmagic Design in kabadan toban sano, weligeed ilaa asalka HD Kamaradaha Shineemadda Blackmagic Pocket. Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay sida 'Into the Rising Sun' ay ula soo baxday qalabkii ugu cuslaa uguna sugi weyno inaan bilowno safarkayaga soo socda Blackmagic Design, ”Ayuu ku soo gunaanaday Wilson.
Sawirada alaabada ee Pocket Cinema Camera 6K, Pocket Cinema Camera 4K, URSA Mini Pro 4.6K G2, Blackmagic RAW, DaVinci Resolve Studio, iyo sidoo kale dhammaan kuwa kale Blackmagic Design alaabada, ayaa laga heli karaa www.blackmagicdesign.com/media/images.
Previous: Bandhiga Q India wuxuu ka furmay Airtel Xstream
Next: Blackmagic URSA Mini Pro On Dalxiis Iyadoo Yar oo Isku Duban